PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - EZEMISAKAZO:
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Ezikaqedisizungu - ZOWAKHA MBATHA
MASONTO onke esilandela nabo le mboni bathi kunezinhlelo ezingabaphuthi nhlobo, kusukela kwezenzeka phakathi nesonto nalezo zangempelasonto.
Imisakazo yethu kumele isebenze kanzima ukusigculisa ukuze singayishiyi, kodwa siqhubeke siyilalele. Phela manje isiminingi imisakazo kanjalo nokunye esingakwenza ngale kokulalela umsakazo ikakhulukazi ongahlabahlose ngalutho.
Kumele abasakazi bethu balwele ukwehluka kwabanye, bagqame ngokusinikeza esikudingayo. Ngiwuthokozelile nombono esiwuthunyelelwe ngomunye wabalandeli bale ngosi ojwayele ukusibhalela, uthemba Dlamini, ofundeka kanje:
UKUBA nomdlandla komsakazi ngenye yezinto esizithokozelayo singabalaleli, ikakhulukazi ezinhlelweni zasekuseni. Kumele sithi uma sivuka, sivuke ngawo lowo mdlandla womsakazi.
Ingihlaba umxhwele indlela asakaza ngayo uhlelo lwasekuseni ngesabatha uzimdollar. Lolu hlelo belusakazwa nguthembeka Zondo phambilini owayengenawo nokho umdlandla njengozimdollar. Ngike ngazinika ithuba-ke ngamlalela ukuthi kungani abaphathi benikeze yena lolu hlelo. Ngiyitholile impendulo nakuba kusekuningi okumele kwenziwe kulolu hlelo.
Lolu hlelo uqala ukulusakaza ngehora lesihlanu.
Ngelesithupha ihora uthatha ikhefu bese kungena ubongani Mavuso nezangempelasonto. Bengingakujabulela ukuthi kube ngubongani Mavuso ongena ngelesihlanu aze aphume ngalo elesithupha, bese uzimdollar eqala kahle uhlelo lwakhe ngenkonzo yakwashembe engicabanga ukuthi iba yimizuzu engama-20.
Kuzothi emuva kwalokho adlale umculo wesicathamiya. Kuyangikhathaza-ke nokho ukuthi ziba ningi izimemezelo zemidlalo yesicathamiya. Ugcina ungalitholanga nethuba elikahle lokuzwa ulozolo lomculo ongaxutshwe nalutho.
Kufana nanohlelo alwenza ngoLwesine ebusuku lapho eqala ngokudlala khona isicathamiya - uvele avulele izingcingo kanti lo mculo vele kawugqanyiswa emsakazweni.
Ngiyacabanga ukuthi angagxila emculweni bese evakasha nje kwabahalalisayo, abakhonzayo nabezimemezelo. Umculo womvalelo nawo uyadingeka kuloluya hlelo. Phela abantu basuke belungiselela ukuthi baye emicimbini ehlukahlukene, lokho kubenza bazikhumbule ngezikhathi zabo besacula umvalelo. Labo abasahamba umvalelo bathola nethuba lokufunda ezinye izingoma ezaziculwa kudala uma kunomvalelo.
Izingoma zemishado ezifana nalezi ezaziculwa yiplatform 1 zikhumbuza labo ababephila ngalezo zikhathi izinsuku ezazimnandi. Lokho kuphinde kufundise intsha yesikhathi samanje ukuthi yayimnandi kanjani imishado yakudala.
Ngiyacabanga ukuthi labo abahalalisayo, abakhonzayo nabezimemezelo kumele banikwe ithuba mhlawumbe uma sekusele imizuzu eli-15 ngaphambi kokuba luphele uhlelo.
Ngiyafisa abaphathi noma abasakazi bengasiphazamisi ngemikhonzo engenasidingo ikakhulukazi uma sisathokozele uhlelo lwezingoma esingajwayele ukuzizwa. Angibonge!!
Singayithokozela neyakho imibono ngokuthinta ezemisakazo kule email engezansi nasezinkundleni zokuxhumana okutholakala kuzona umbhali. Instagram: @zowakha Facebook: Zowakha Mbatha Twitter: @Zowakha zowakha@ilanganews.co.za